उपेन्द्र यादव वाम कि लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा? :: भानुभक्त :: Setopati
उपेन्द्र यादव वाम कि लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा?
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असोज १९
राजनीतिक दलहरु एकातिर एमाले र माओवादीको वाम र अर्कातिर कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा ध्रुवीकरण भइरहेका बेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम कुन गठबन्धनमा सामेल हुने टुंगोमा पुगिसकेको छैन।
१५ जना सांसद रहेको फोरम कुन गठबन्धनमा लाग्छ भन्ने कुराले सत्ता समिकरणमा तत्काल खास असर पर्ने सम्भावना कम भए पनि आगामी प्रदेश र संघको चुनावमा फोरम कुन गठबन्धनमा सहभागी हुन्छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्ने देखिन्छ। किनकी असोज २ गते भएको प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचनमा फोरम दोस्रो ठूलो दल बनेको थियो। स्थानीय निर्वाचनबाट देशभरिमा फोरम चौथो ठूलो शक्ति हो बनेको छ। एक महानगरसहित ३४ स्थानीय तह जितेको त्यही फोरमलाई दुबै गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा तानातान गरिरहेका छन्।
तर कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि भएका तर पछिल्लो समय मधेस केन्द्रीत दल बनाएर राजनीति गरिरहेका यादव आफ्ना लागि उपयुक्त गठबन्धन कुन हो भन्ने निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्। उनले दुबै गठबन्धनसँग छलफल जारी राखेका छन्।
गत मंगलबार एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिको गठबन्धन घोषणा हुनुभन्दा पहिला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फोरम अध्यक्ष यादवलाई आफूहरूको गठबन्धनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। गठबन्धन घोषणा हुनुभन्दा पहिला दाहाल र यादवबी भेट वार्तासमेत भएको थियो। अत्यन्तै गोप्य भनिएको सो भेटमा यादवले दाहाललाई गठबन्धन बन्नु सकारात्मक भएको बताएका थिए भने दाहालले उनलाई पनि गठबन्धनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि दाहाल र यादव निरन्तर छलफलमा रहे। त्यही छलफलका आधारले धेरै यादव वाम गठबन्धनमा जान्छन् भन्ने धेरैको अनुमान थियो।
तर यादव वाम गठबन्धनमा सहभागी भएनन् बरु लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन बुधवार कांग्रेसले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा उपस्थित भए। सो बैठकले बृहत लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन कार्यदल समेत बनाइसकेको छ। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै यादवले कांग्रेससँग सामान्य कुराकानी मात्रै भएको बताए।
‘सामान्य कुरा भएको हो। ठोस छलफल भएको छैन,’ उनले भने,‘धेरै छलफल हुन बाँकी छ। अहिले नै गठबन्धन बन्छ की बन्दैन भनेर भन्न सकिन्न।’
उनले नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धनबारे कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘सरकार गठन हाम्रो प्राथमिकता छैन। सरकार फेरबदलमा समाजवादी फोरम लाग्दै न।’
लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि कार्यदल बनाउन बुधबार बैठक डाकिएको छ। गठबन्धनका लागि आज फेरि बैठक बस्ने भनिए पनि अहिलेसम्म छलफलका लागि कुनै जानकारी नआएको समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा सहभागी हुने दलहरुको बैठक आज फेरि बसे पनि त्यो बैठकमा यादव सहभागी हुने सम्भावना नरहेको उनी निकट स्रोतले बतायो।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज १९, २०७४, ०४:२९:५१